Tag: caddị mpempe akwụkwọ cascading | Martech Zone
Tag: caddị mpempe akwụkwọ cascading
WordPress: Hazie CSS ma ọ bụrụ na Post Bipụtara Taa
Sunday, May 20, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Anọ m na-achọ ịgbakwunye obere eserese kalenda na posts m nwa oge ugbu a. Edere m klas abụọ maka ụbọchị div ma setịpụ ihe ndabere dị iche iche dabere na edere post ahụ taa ma ọ bụ na edeghị ya. Daalụ Michael H na Nkwado Nkwado WordPress, emesịrị m nweta nkwupụta m ziri ezi! Nke a bụ ihe m mere. M nwere ndabere image set maka ụbọchị div ụbọchị: Maka ịgba taa,
Edemede mara mma na etu esi eji ejiji egosiputa koodu na blọgụ gị ma ọ bụ websaịtị iji Cascading Style Sheets (CSS).